SEGA Heroes dia mitondra anao Sonic sy ny namany amin'ny lalao XNUMX | Androidsis
[APK] Afaka misintona Heroes SEGA ho an'ny Android miaraka amin'ny Sonic sy maro hafa ianao izao
SEGA Heroes no vaovao amin'ity orinasa malaza ity ary noforoniny tamin'ny 0 hanaraka ny tohin'ny Candy Crush Saga. Farafaharatsiny, efa niasa kely izy ireo ary mametraka antsika alohan'ny RPG izay hanambaranay vato sarobidy maromaro hampiasana ny fahaizan'ny tsirairay amin'ireo maherifon'ny ekipantsika.
Ny iray amin'ireo zava-bitany lehibe indrindra dia manangona Sonic, Tails ary karazana tsara ny endri-tsoratra amin'ny andian-dahatsoratra lehibe toy ny Sonic, Golden Ax, Streets of Rage ary maro hafa. Piozila RPG mbola tsy navoaka tao amin'ny Google Play Store, na dia azonao atao amin'ny APK aza ity eo am-pamaranana ity lahatsoratra ity.
1 Lalao SEGA noforonina hatrany am-boalohany
2 Puzzles tic-tac-toe misy RPG kely
3 Ary bebe kokoa amin'ny SEGA Heroes
Lalao SEGA noforonina hatrany am-boalohany
Ankoatra ny fananana Sonic sy ny maro hafa, ny zavatra tsara indrindra dia ny SEGA tamin'ny farany nanangana lalao ho an'ny finday noforonina avy amin'ny 0. Misy zavatra tadidio, satria namoaka seranana ratsy lohateny arcade klasika fotsiny izy. Anisan'izany ny ny arabe farany amin'ny hatezerana 2 izay, na dia tsy ratsy mihintsy, dia azo nampiasaina tamin'ny fomba hafa.
SEGA Heroes dia mampatsiahy antsika zavatra hafa iray hafa mametraka ny accent amin'ny matematika ary izany dia tany am-boalohany kely kokoa noho io. Na dia manana ireo endri-tsoratra SEGA angano rehetra aza dia mihoatra ny zava-dehibe fanampiny mba hankafizana lalao mifototra amin'ny izay rehetra atao hoe KING miaraka amin'ny Candy Crush Saga; vao haingana namoaka iray hafa miaraka amin'i Candy Crush Friends Saga.
SEGA Heroes dia miorina amin'ny mekanika an'ny mitambatra vatosoa samihafa ny Candy Crush Saga. Ny zavatra tokana izay isaky ny haintsika ny mampifangaro iray dia hampiasa ny fitaovam-piadiany ny iray amin'ireo maherifontsika hanafika ny vondrona fahavalo izay ho eo alohantsika. Miankina amin'ny lokon'ny vatosoa izay nampiarahanay, hampiasa maherifo iray na iray izahay, na dia amin'ny fotoana iray aza dia hampiasaina miaraka.
Puzzles tic-tac-toe misy RPG kely
Raha mampiasa kintana amin'ireto fitambarana vatosoa samihafa ireto isika, dia afaka mamely mafy kokoa. Toy izany dia hiala mameno ny bara fitendrena manokana izay manana ny maherifon'ny ekipantsika. Tsindrio ny bokotra mifanentana aminay, ary hanomboka ny kapoka manokana.
Manana safidy ihany koa isika hisafidy ny fahavalo izay handray ny fiatraikany mba hahafahantsika manao esory ny sasany amin'ireo fahavalon'ny fahefana lehibe kokoa Fanafihana. Ary zavatra kely hafa hiresaka momba ny mekanika lalao lehibe, satria mifototra amin'ny fahalalana ny fomba hanambatra haingana ireo vatosoa ireo hitohy, nefa, ireo fahavalo rehetra izay ho hitantsika ao amin'ny SEGA Heroes.
Lalao izay ahafahantsika miakatra, mitovy amin'ny mamoha namana vaovao lalao izay hampidirinay ao amin'ny ekipanay. Ny tsirairay dia samy manana ny fahaizany ary afaka manatsara azy ireo amin'ny isa isika mba hatanjaka kokoa sy hatanjaka kokoa.
Ary bebe kokoa amin'ny SEGA Heroes
SEGA Heroes dia afaka manao izany mamorona guild ary hiaraka aminy hilalao amin'ireo namanao na mpiara-miasa aminao. Na dia ny mahafinaritra indrindra aza dia ny mamoha ny endri-tsoratra SEGA rehetra mba hahafantarantsika ny tena herin'izy ireo. Ary ny tena marina dia betsaka izy ireo, noho izany manana fotoana lava iainana isika hankafizantsika ny lalao izay ezahin'ny orinasa Koreana noforonina hatrany am-boalohany. Zavatra ankasitrahana rehefa nanao ratsy kely foana izy io.
Mifanaraka amin'ny lafiny teknika tsy misy filalaovana be. Tsy misy na inona na inona misongadina amin'ny fomba be dia be, na dia ny fahaiza-manao aza no ho fotoana mahasosotra indrindra miaraka amina andiam-vokany tena tsara. Lalao maimaim-poana azonao andramana amin'ny APK raha tsy te hiandry ianao.
SEGA Heroes dia tonga amin'ny Android amin'ny fikasana rehetra amin'ity orinasa ity mba hahafahanao mankafy manambatra vatosoa sy mampiasa ny fahaiza-manaon'ny ekipanao mba hialana amin'ireo fahavalo rehetra ireo.
marary mitsika: SEGA Heroes APK
Fialamboly ary avelao hilalao
Manana Sonic sy namana
Blandy tsara tarehy
SEGA Heroes: Lalao RPG sy Match-3 miaraka amin'ny Sonic
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » [APK] Afaka misintona Heroes SEGA ho an'ny Android miaraka amin'ny Sonic sy maro hafa ianao izao
Amin'ny antsipiriany: ity ny Kirin 980, ny SoC an'ny andiany Mate 20 an'ny Huawei